Toetr’andro : mitondra orana ilay andian-drahona | NewsMada
Toetr’andro : mitondra orana ilay andian-drahona
Nanaitra ny mponin’Antananarivo ny fisian’ny ora-mikija tamin’ny faramparan’ny herinandro iny. Nitondra fanazavana ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby fa misy andian-drahona mitoetra eo afovoany atsinanan’i Madagasikara ka miteraka orana sy andro maloka ary fidinan’ny mari-pana.
Tany an-dranomasina izy io ary natosiky ny rivotra avy atsinanana na atsimo atsinanana ka tafiditra aty amin’ny faritry ny afovoan-tany. Mandalo io andian-drahona io ka hanomboka hisava izany anio alatsinainy.
Anisan’ny faritra hahazo rotsak’orana betsaka ny any amin’ny ilany atsinanan’ny Nosy vokatr’io andian-drahona io. Anisan’izany ny any Sava, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Vatovavy Fitovinany.